Yimaphi Amakhono Athambile Adingekayo Ekulimeni?
Which Soft Skills are Needed for Farming
Akudingi kuphela amakhono akhuthele adingekayo (isibonelo, ukushayela, ukugoma, ukuchelela noma ukutshala izitshalo) kodwa namakhono athambile njengokuxhumana okuhle okucacile, isimo sengqondo esihle nokuthembeka.
Khumbula ukuthi konke okwenzayo kudala umqondo kumuntu. Qinisekisa ukuthi lokho okushiwo kulungile.
Nazi amakhono ambalwa amancane adingekayo ukuze abe umlimi ophumelelayo.
Yiba Nesimo Sengqondo Esihle
Isimo sakho sengqondo sizokuthatha impilo yakho phambili kunanoma iyiphi enye impahla ongayithola. Isimo sengqondo esihle sisho ukusebenza ngokuzikhandla nokusebenza kanzima. Hlala uzimisele ukuthatha imisebenzi eyengeziwe futhi ungagcini. Isimo sengqondo esihle senza kube kuhle kwabanye abantu ukuba babe eduze kwakho.
Ungakhathazeki. Uma usesikhundleni esiphakeme, ungase ungabi umholi ngenxa yesimo sakho. Uzoba umholi uma abantu bebuka kuwe. Yiba omunye weqembu bese uhola ngaphakathi kwethimba. Uma bekuhlonipha futhi bazi ukuthi uyabakhathalela, bazokwenza ube ngumholi wabo futhi balandele isibonelo sakho.
Bonisa Imikhuba Emihle Yomsebenzi
Ukuthi ukuziphatha komsebenzi kusho ukuthini? Isimo sakho sengqondo emsebenzini wakho. Kusho ukuthi wenze umsebenzi wakho uqaphele imininingwane. Gcina incwadi bese ubhala ephaketheni lakho ukwenza amanothi bese ubhala imibuzo.
Funa amathuba okufunda nokwenza okungaphezu kwalokho okulindeleke kuwe. Ekupheleni kosuku, awukwenzi ngempela kumqashi wakho, uyazenzela wena.
Ukuthembeka nokwethenjelwa kuhlangene, kodwa akuyona into efanayo. Uma uhlale uthembekile, umqashi wakho nabantu abazungezile bayokuthemba.
Wonke umuntu wenza amaphutha, kodwa indlela obhekana ngayo nephutha ingaphelela ekubaluleke ngaphezu kwephutha ngokwalo. Uma wenza iphutha - elikhulu noma elincane - tshela umqashi wakho. Thatha umthwalo wemfanelo. Umqashi wakho uyakwazisa isimo sakho sengqondo esihle nesibindi sakho sokuma phambi kwakhe bese uthi 'sorry'.
Hlela Kahle Isikhathi Sakho
Lapho ukulima, ukuhamba ngesikhathi kubalulekile. Empeleni, zama ukuqala emsebenzini usuku nosuku. Uma usuka kusihlwa, qiniseka ukuthi konke kuhlelekile. Ngokwenza lokhu, ubonisa ukuthi uzimisele. Leyo mizuzu embalwa ayikwenzi umehluko omkhulu kuwe kodwa ingase ishiye umbono omkhulu kumqashi wakho. Uziqeqesha ngokwakho ukuthatha umthwalo wemfanelo futhi ungase uzenzele isikhundla sokuphatha.
Njalo ube nesikhathi sokuqokwa. Isibonelo, uma ucabanga ukuthi kuzothatha imizuzu engu-30 ukufika lapho, shiya amaminithi angu-45 ngaphambi kwesikhathi somhlangano.
Yiba nenombolo yokuxhumana yomuntu ohlangana naye futhi ubazise uma kwenzeka okuthile okungabangela ukubambezeleka.
Yenza Umsebenzi Omuhle
Qinisekisa ukuthola imininingwane ngokufanele - ingasho ukuthi umehluko phakathi kokuhluleka nokuphumelela. Uma unikezwa umsebenzi wokwenza, qiniseka ukuthi kufeziwe kahle futhi ngokufanele.
Ukwenza okuthile okulungile akufani nokuphatha okuncane. Uma unabantu abakusebenzelayo, qinisekisa ukuthi bayazi umsebenzi wabo nokuthi uyabethemba. Vumela ukuba benze izinqumo endaweni yabo yomthwalo wemfanelo.
Uma ubona ukuthi othile udinga usizo ngomsebenzi, ake usize. Akukhathaleki ukuthi umsebenzi ungubani noma ukuthi ungubani. Bonisa ukuthi uyakhathalela - ngokuhamba kwesikhathi ungadinga usizo lwazo futhi.
Owayengumfundi ozofunda esikhathini esizayo uLunga Ndwandwa ufingqa amakhono athambile adingekayo ekulimeni: 'Uthando luyisici esibaluleke kakhulu. Kumele uthande lokho okwenzayo. Lithinta isimo sakho sengqondo nokuphila kuba lula. Njalo ube ngowokuqala emsebenzini futhi owokugcina uhambe. Sebenza njengokuthi ibhizinisi lakho ngoba uma wenza kanjalo, ngolunye usuku uzozisebenzela wena.'